आफ्नी कुमारी छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साढे ३ करोड इनाम दिने एक धनाढ्य-बाबुकाे घोषणा ! – Life Nepali
आफ्नी कुमारी छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साढे ३ करोड इनाम दिने एक धनाढ्य-बाबुकाे घोषणा !
काठमाडौँ। मानिसहरुका अनेक सोच तथा चाहना हुन्छन् । सुन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । बेलाबखत यस्तै अनौठा घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । एउटा विचित्रको घ’टना सार्वजनिक भएको छ जहाँ एक धनाढ्यले आफ्नी कुमारी छोरीसँग विहे गर्नेलाई साँढे ३ करोडको इनाम दिने घोषणा गरेका छन् । छोरीको बिहे गराउनका लागि थाइल्याण्डका एक धनाढ्य व्यापारीले अनौठो घोषणा गरेका हुन् ।
कन्याकुमारी छोरीसँग विवाह गर्ने केटालाई उनले उल्टै इनामस्वरुप २ लाख ४० हजार पाउण्ड (झण्डै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ) दिने घोषणा गरेका हुन् । तर ती व्यापारीले आफ्नी छोरीसँग बिहे गर्ने केटामा तीन योग्यता हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । पहिलो सर्त- केटा स्मार्ट हुन जरुरी नभए पनि पढ्न लेख्न जानेको हुनुपर्ने । दोस्रो-केटा मेहनती तथा लगनशील हुनुपर्ने । तेस्रो-केटा कन्जुस र फलहरूलाई माया गर्ने हुनुपर्ने ।
अर्नोन राडथोंग नामक ती धनाढ्य व्यापारीले आफ्नी कुमारी छोरी कार्नसितासँग बिहे गर्नेलाई सो इनाम दिने घोषणा गरेका हुन् । थाइल्याण्डको दक्षिणी प्रान्त चुन्फोनका ती व्यापारीले छोरी अहिलेसम्म कुमारी नै रहेको र आफूसँगै व्यापारमा सघाउँदै आएको बताएका छन् । उनकी छोरी कर्निता २६ वर्ष नाघेको उनले बताएका छन् । स्नातक तहसम्म पढेकी उनी चिनियाँ र अंग्रेजी भाषा बोल्नमा सक्षम रहेको उनको दाबी छ । छोरीको बिहे हुन नसकेको चिन्ताले गर्दा ५८ वर्षका ती व्यापारी अर्नोनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले आफू एक कृषि फार्मको मालिक रहेको बताएका छन् ।-एजेन्सी
Previous ह’ति’यारसहित सीमामा पुगेर कलाकार कुमार कट्टेलले भने, ‘मातृभूमिको सुरक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य
Next राज्यलाई आर्थिक भा’र पर्ने भन्दै पछाडि गा’र्ड राखेर राज्यमन्त्री मोटरसाइकलमा सरर.. सम्मान स्वरुप सेयर गरौ !